Understanding SAMBA ~ Root Of Info
on April 09, 2019 in Linux with2comments
အခု article ကတော့ SAMBA တစ်နည်းအားဖြင့် SMB (Server Message Block) service အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Samba သည်လဲ Network File Sharing Service တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့ကိုတော့ Windows Environment မှာအသုံးပြုပါတယ်။ Samba service ကို standalone အနေနဲ့လည်း သုံးနိုင်သလို Active Directory နှင့် Integrate လုပ်ပြီးတော့လဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Samba service ကို Linux kernel driver နဲ့ cifs-utils တို့က provide လုပ်ပေးပါတယ်။
node01.private.com = samba server
node02.private.com = samba client
ထုံးစံအတိုင်း လိုအပ်သော package ဖြစ်တဲ့ samba ကို သွင်းပါမယ်။
ပြီးရင် samba share directory တစ်ခု တည်ဆောက်မယ် ပြီးရင်တော့ samba share directory ကို access လုပ်မယ့် group တစ်ခု တည်ဆောက်ပေးမယ်။
Set the SELinux for SAMBA Directory
RHCE exam မှာက SELinux default enforce လုပ်ထားတဲ့အတွက် samba အတွက် လိုအပ်တဲ့ SElinux ကို အသုံးပြုပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ အခု တည်ဆောက်ထားတဲ့ share directory ကို samba အတွက် လိုအပ်တဲ့ SELinux ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ /etc/samba အောက်က smb.conf ထဲမှာ အခု အသစ်တည်ဆောက်ထား တဲ့ share directory (smbshare) ကို ထည့်သွင်းပေးရပါမယ်။ Write list option မှာ @smbgroup လို့သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် smbgroup ထဲမှ memeber တွေသည် Read/Write access ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ user1 ဆိုတဲ့ user account တစ်ခု ဆောက်မယ် ပြီးရင် smbgroup ထဲကို member အနေနဲ့ သွင်းလိုက်ပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ user1 ကို samba access အတွက်ပဲ သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကို bash log in ပေးထားစရာမလိုအပ်ပါဘူး။
တည်ဆောက်လိုက်တဲ့ user1 ကို samba credential ပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက် samba-client package ကို installation ပြုလုပ်ပါမယ်။
ပြီးရင်တော့ user1 အတွက် smb credential သတ်မှတ်ပေးရပါမယ်။
ပြီးရင်တော့ samba services ကို start and enable လုပ်ပေးပါ။
Firewall မှာလဲ samba service ကို allow ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။
Configuring for samba client
Server ဖက်ခြမ်း ပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားရင်တော့ အခု samba client ဖက်ခြမ်းမှာ လိုအပ်တဲ့ package ကို installation ပြုလုပ်ပါမယ်။
Mount လုပ်ဖို့ရန်အတွက် /mnt အောက်မှာ directory တစ်ခု တည်ဆောက်ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ တစ်ဖက် samba server က share ပေးထားတဲ့ "smbshare" ကို samba အတွက် တည်ဆောက်ထားတဲ့ user account user1 ကိုအသုံးပြုပြီး access လုပ်ပါတယ်။ Samba config ထဲမှာ smbgroup ကို REDA/Write ပေးထားတဲ့အတွက် user1 credential နှင့် full permission ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့် တို့ mount လုပ်ထားတဲ့ samba file share ကို /etc/fstab ထဲမှာ ရေးပြီး permanent အမြဲဖြစ်စေချင်ရင် အရင်ဆုံး /etc/samba/ အောက်မှာ credential file တစ်ခု ဆောက်ရပါမယ်။ ထိုအထဲမှာမှ စောနက တည်ဆောက်ထားတဲ့ user1 ရဲ့ user credentail ကို ထည့်သွင်းပေးရပါမယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ /etc/fstab ထဲမှာ permanent ဖြစ်အောင် အပေါ်မှာ create လုပ်ခဲ့တဲ့ credentail file ကိုသုံးပြီး ရေးသားလို့ပါတယ်။
Enjoy Reading!!! Thank You!!! :)
Unknown April 9, 2019 at 11:59 PM
How i do solve Unable to find
Suitable address on client mounting
Root Of Info April 10, 2019 at 9:53 AM
Try to check your credential file. Does it have an extra space or anything?